Akụkọ - Nfefe igbe ọkụ dị mma
Ihe igbe ọkụ: mpempe akwụkwọ acrylic ebubata, eriri agba acrylic
Aha ngwaahịa: Mpempe akwụkwọ ozi acrylic na-echekwa ọkụ ọkụ
Ihe kachasị elu nke igbe mgbasa ozi acrylic nke Zhengcheng na-azọpụta ike
1. Nhazi nke warara nke agba atọ mara mma nke ukwuu.Mpempe akwụkwọ acrylic ọhụrụ ebubatara nwere agba zuru oke yana nnyefe ọkụ siri ike.E jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị yiri ya, igbe ọkụ mbinye aka nke Zhengcheng na-egbuke egbuke.
2. Ngwaahịa a bụ 100% waterproof, n'ihi na anyị na-eji a pụrụ iche n'ụzọ zuru ezu mechie kabinet imewe, n'ime nke ìhè igbe bụ kpam kpam airtight, n'ihi ya, ọ pụrụ iji na mmiri ozuzo ihu igwe, na-agbatị ndụ nke na-edu tube.
3. N'otu oge ahụ, ngwaahịa a bụ uzuzu uzuzu, igbe ọkụ na-ejikọta ya site na ọnya, mgbe ahụ, a na-ejikọta ogwe osisi acrylic na aka, nke mere na ngwaahịa a na-emepụta bụ ihe na-ekpuchi uzuzu, nke na-agaghị emetụta nchapụta nke ìhè. akara ahụ, ma ọ dị mfe ihicha.
4. Ụlọ ọrụ anyị nwere ndị na-emepụta ọkachamara.Dị ka ụlọ ahịa nke onye ahịa na mkpa ndị ahịa si dị, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe osise n'efu, na-eziga ha na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mgbe akụkụ abụọ ahụ nwere afọ ojuju.
Ngwaahịa a chọrọ naanị nzọụkwụ anọ dị mfe iji dochie tube a na-eduzi, na ọrụ ahụ dịkwa mma.
Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Akara ngosi, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Igbe nrịbama nke mpụga, Ihe nrịbama ụlọ ahịa,